Heshiiska Berbera iyo Halisaha ku Gedaaman. – Xeernews24
Heshiiska Berbera iyo Halisaha ku Gedaaman.
13. April 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Runtii ma aha Imaaraadku dal u baahan in uu cudud ciidan ku ilaaliyo danaha dhaqaale ee kooban ee uu leeyahay, danihiisa dhaqaale laftooduna ma aha qaar sidaas u buuran, lana joogtayn karayo mudada dhexe iyo ta fog toona marka la eego arrimaha aan kor ku soo sheegnay ee dabraya. Haddaba dad badan oo siyaasadda aqoon u leh ayaa aaminsan in isballaadhinta Imaaraadka ee dhinaca ciidamada ee
iminka socotaa tahay mid ku salaysan laab lakac, ismiidaamin, iyo xafiiltan aan aragti dheer ku dhisnayn oo kala dhaxaysa hogaamiyeyaasha khaliijka ee ay kala aragtida duwan yihiin sida Qadar.
Isbeddel dhanka hogaanka ah ayaa ka dhacay Itoobiya, waxase mudan in la fahmo ayaa ah ‘in aanay inta badan is bedelin siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya’. Laga soo bilaabo boqorkii Tewodros oo ahaa boqorkii u horeeyey ee dejiyay siyaasadda dalkiisa (Itoobiya) ee ku waajahan gobol weeynaha Geeska Afrika, iyo dhammaan boqorradii kadambeeyey oo ay ku jiraan Boqor Yohannis IV, Menelik II ilaa laga soo gaadho Boqor Xayle Salaase iyo hannaanka siyaasadeed ee jira ee uu horseedka ka ahaa Malase Sanaawi, siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxa udub dhexaad u ah Amni, dhul ballaadhsi iyo helidda marin badeed.
Waxaa jidkaas Madaxweeyne Geelle mid ka duwan qaaday madaxweeynayaashii u dambeeyay ee Soomaaliland. Waxa ay si fudud oo aan kafiirsasho lahayn u suurageliyeen damicii istaraatijiga ahaa ee Itoobiya iyaga oo si shuruud la’aan ah ugu gacan geliyay baddii Somaliland – iyaga, haka noqoto hubsiimo la’aan ama aqoon la’aan tii ay doontaba e. Waana arrin halisteeda leh. Haddii Ingiriiskii Xayle Salaase siiyay dhul Soomaliland lahayd oo la odhan jiray Hawd iyo Riseef area, waxa todobaatan sanno kadib dhacday in baddii Itoobiya ay ku taamaysayna ay hogaamiyayaasha Soomaalilaan gacantooda ugu saxeexeen oo ay siiyeen, iyaga oo aan isweydiin saamaynta ay mustaqbalka yeelan karto arrintan uu ka gaws adaygay Madaxweeyne Geelle.
Qore: Abdinasir Ibrahim Saacadaale.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/Somaliland-ri.jpg 514 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-13 08:41:432018-04-13 08:41:43Heshiiska Berbera iyo Halisaha ku Gedaaman.
XIISAD CUSUB:Daladda Feedaraalka Soomaalia”heshiiska Imaaraadka ee taba-barka... Wasiir Oomaar oo Istanbul kullan kula qaatay Madaxda Shirkadda Turkiga Airl...